Macluumaadka Daryeelka Badeecada - Fujian Bridge Style Furnishings Co., Ltd.
Sida Loo Daryeelo Boodhkaaga Goynta Bamboo
1. ku maydh biyo diiran isla marka la isticmaalo, ku tirtir qoyaanka maro qalalan.
2. Ku dheji boodhka goynta meel qalalan oo hawo leh. sudhitaanka iyo ku dhejinta istaagga ayaa ah habka ugu fiican.
3. Weligaa ha u daynin biyo muddo dheer, Marna ha dhigin mashiinno heerkulkoodu sarreeyo sida mashiinnada weelka lagu dhaqo, foornada microwave, oo marna ha u dhigin qorraxda. Waxay si dhakhso leh u beddeli doontaa ama u jajabin doontaa guddiga goynta aad jeceshahay. haddii aad rabto inaad nadiifiso, way fiicantahay inaad qorraxda sii joogtid 5-10 daqiiqo.
Nadaafadda maalinlaha ah waxaa sii dheer, saliid si joogto ah ayaa loo baahan yahay. Soo noqnoqoshada ugu fiican waa hal mar labadii toddobaadba mar. Kaliya ku rid 15ml oo saliidda wax lagu karsado ah dheriga oo kuleyli ilaa 45 digrii, ka dibna ku qooji maro nadiif ah. Qaado qaddar ku habboon oo ku tirtir dusha sare ee guddiga goynta si wareegsan. Waxaa loo isticmaali karaa sida huurka qoyaanka bamboo iyo hub biyo xiraya. Waxay ku ilaalin kartaa qoyaanka bamboo illaa inta ugu badan ee xaaladaha isbeddellada ba'an ee cimilada, waxayna sidoo kale ka dhigi kartaa guddiga goynta la isticmaalay mid cusub.
5.Haddii guddigaaga goynta uu leeyahay ur gaar ah, habka ugu wanaagsan ayaa ah inaad ku isticmaasho soodhaha iyo liinta dusha sare, ku tirtir maro qoyan oo diirran, mar labaadna waxay u muuqan doontaa cusub.
Talooyin: Sharaxaaddan waxaa lagu soo saari karaa calaamadeysan oo lagu duubi karaa shey kasta oo bilaash ah, dhakhso u samee oo dalbo amar!
Sida Loo Daryeelo Abaabulaha Khaanadda Bamboo
1.Ha dhigin Qabanqaabiyaha Khaanadda Bamboo biyo muddo dheer. Ku quusin muddo dheer biyaha ayaa furi kara fiilooyinka dabiiciga ah waxayna sababi karaan kala tag.
2.Fadlan hubi in biyaha ku jira flatware-ka iyo walxaha aad keydiso ay yihiin kuwo qalalan, taasi kaliya ma kordhin karto nolosha adeegga badeecada, laakiin sidoo kale waxay hor istaagi doontaa soo saarista bakteeriyada.
3.Waxaa loogu talagalay isticmaalka muddada dheer, ku qalaji Qabanqaabiyaha Khaanadda ugu horreysa shukumaan nadiif ah ka dib maydhashada iyo isticmaalka ka dib.
4.Ha ku nadiifin saxanka goynta Bamboo ee weelka weelka lagu dhaqo.
5.Xilliga qaarkood, waxaad u baahan tahay inaad saliideyso Abaabulaha Khaanadda Bamboo, Kaliya isticmaal saliidaha macdanta ah ee marada ah maro jilicsan oo masax dusha sare, waqtiga saxda ah waa 2 toddobaad hal mar.
6.Haddii Abaabulaha Bamboolahaaga Soosaara uu yeesho ur kasta oo la yaab leh, ku masax liin dhanaan iyo soodhada dubka.waxay mar kale u eegi doontaa war.